Audacity 3.0.3 ikozvino yave kuwanikwa seAppImage | Linux Vakapindwa muropa
Mumwedzi mishoma yapfuura pakange paine buzz yakawanda yakatenderedza imwe yeanonyanya kufarirwa evhura sosi wave editors. Asingasviki mwedzi mitatu yapfuura, MUSE Boka rakawana Audacity mune yaive yekutanga episode yesipo opera iyo ichiri kupfura. Pano tinonyora akati wandei zvinyorwa nezvazvo, senge imwe inotsanangura kuti ndeipi data richaunganidza hereinafter, imwe ine dzimwe nzira y imwe inenge maforogo maviri izvo zvisingaunganidze telemetry, asi hupenyu hunoenderera uye nezuro yakawanikwa Audacity 3.0.3.
Haisi yekuvandudza yezvakanyanya kukosha munhoroondo yesoftware uye, yakandinyengedza, zvainge zvayambuka pfungwa dzangu kuti ndaizoverenga chimwe chinhu chine chekuita nekukumbira ruregerero uye kuti havasi kuzotora chero dhata nezvedu. Hapana icho. Chinhu chakanaka chevashandisi veLinux ndechekuti, kune avo vasingade kuisa chero chinhu, Audacity 3.0.3 ikozvino yave kuwanikwa seAppImage.
Chii chitsva mu Audacity 3.0.3
Iyo Windows vhezheni yeAudacity ikozvino 64-bit (Cherekedza: 32-bit plug-ins haishande pane 64-bit Audacity).
Iwo akasarudzika spectrogram mavara akagadziridzwa.
Bhinari yeLinux yepamutemo ikozvino yapihwa muchimiro cheAppImage (inowanikwa pano).
Kwidziridzo cheki: Audacity ikozvino inogona kutarisa kuti ive nyowani vhezheni inowanikwa.
Bug Report - Inobvumira vashandisi kuendesa iwo madhiri einouraya bug.
Zvipembenene zvakasiyana zvakagadziriswa
Ini pachangu, kutaura kuti iyo Flatpak vhezheni yandikundikana muManjaro uye ini ndaifanirwa kuidzosera. Kune zvese zvimwe zvinhu, Audacity haidi nhanganyaya, uye chete mashoma mashoma apfuura, kuti kune vhezheni muAppImage uye shanduko yemuridzi inofanira kutiita isu tione kana tichida kuenderera tichishandisa kana kwete. Kune yangu chikamu, ini ndichamirira kuti ndione kuti rutsigiro rwunoenda sei mune mamwe maforogo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Uye pakati pekupokana, MUSE Boka rinotanga Audacity 3.0.3 uye inosanganisira AppImage vhezheni yeLinux
WayDroid: Anbox ine makwikwi, kunyangwe ichingova chikamu, uye inogona kuipfuura